Wararka - GlassTec - Caqabadaha Cusub
Glasstec VIRTUAL laga bilaabo 20 ilaa 22 Oktoobar ayaa si guul leh u soo afjaray farqiga u dhexeeya hadda iyo glasstec soo socda bisha Juun 2021. Iyada oo fikradeeda ay ka kooban tahay wareejinta aqoonta dhijitaalka ah, fursadaha bandhigga cusub ee soo bandhigayaasha iyo sidoo kale ikhtiyaarrada isku xirka shabakadaha ee dheeri ah, waxay ku qancisay qaybta muraayadaha caalamiga .
Messe Düsseldorf oo leh glasstec faylalka faylalka ee muuqaalka leh ayaa muujinaya inay ku guuleysan karto isu keenida warshadaha adduunka oo dhan, ma ahan oo keliya dhacdooyinka jireed laakiin sidoo kale qaababka dhijitaalka ah. Taas macnaheedu waxa weeye inay sii wadayso inay isu taagto mar kale inay noqoto meesha 1-aad ee lala xiriiro xiriirka ganacsi ee caalamiga ah, ”ayuu yidhi Erhard Wienkamp, ​​COO Messe Düsseldorf.
- Cudurka faafa ee adduunka wuxuu caqabad weyn ku yahay warshadaha muraayadaha iyo sidoo kale mashiinada iyo warshadaha soo saara waaxdan. Sidaa darteed, waxay ahayd mid aad muhiim u ah in Messe Düsseldorf uu na siiyay qaabka cusub "glasstec VIRTUAL" si aan u soo bandhigno alaabteena cusub waqtiyadan sidoo kale. Ka duwan glasstec-ka caadiga ah, laakiin waa calaamad muhiim ah oo cad u leh warshadaha. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka faa'iideysanay barnaamijka balaaran ee shirka iyo fursada aan ku muujin karno horumarka cusub iyo waxyaabaha muhiimka ah iyadoo loo marayo fadhiyada webka iyo kanaaladayada, sidoo kale waxaan helnay jawaab celin wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waxaan dabcan rajeyneynaa inaan mar kale kula kulanno glasstec Düsseldorf bisha Juun 2021, ”ayuu yiri Egbert Wenninger, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Qaybta Ganacsiga, Grenzebach Maschinenbau GmbH iyo Guddoomiyaha guddiga latalinta ee glasstec.
Intii lagu gudajiray mudadii safka faafa, xalkaani wuxuu noo suurta galiyay in aan warshadaha siino barxad dheeri ah oo lagu xoojinayo laguna balaarinayo xiriirada caalamiga ah. Hada waxa diirada la saaray diyaarinta glasstec, oo lagu qaban doono halkan Düsseldorf laga bilaabo 15 ilaa 18 June 2021, ”ayay tidhi Birgit Horn, oo ah agaasimaha mashruuca glasstec.
In kabadan 120,000 bog oo bogaadin ah ayaa hoosta ka xariiqaya xiisaha xiisaha leh ee ay uqabteen bulshada muraayadda ah waxyaabaha kujira glasstec VIRTUAL. Carwada Bandhiga, 800 oo carwo ka socota 44 dal ayaa ku soo bandhigay wax soo saarkooda, xalalkooda iyo codsiyadooda. In kabadan 5,000 oo qof ayaa kaqeyb qaatay qaababka isdhaxgalka. Dhammaan fadhiyada websaydhka iyo raadadka shirarka ayaa dhowaan la heli doonaa iyadoo la dalbado. Qolalka bandhigyada ee kaqeybgaleyaasha kaqeybgalaya sidoo kale waxaa heli doona martida ilaa glasstec bisha Juun 2021.
Waqtiga boostada: Nofeembar-09-2020